Ch 2 John – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaJohani / Ch 2 John
2:1 Uye pazuva retatu, muchato wakaitwa paKana yeGarirea, namai vaJesu vakange varipo.
2:2 Zvino Jesu vakokwawo kumuchato, nevadzidzi vake.
2:3 Uye waini yakati kukundikana, mai vaJesu vakati kwaari, "Havachina waini."
2:4 Zvino Jesu akati kwaari: "Zvinei neni uye kuti iwe, mukadzi? Awa yangu haisati yasvika. "
2:5 Mai vake vakati kuvaranda, "Itai zvose zvaanokuudzai."
2:6 Zvino panzvimbo iyo, pakanga amabwe matanhatu dzokushamba, nokuti yokunatsa tsika yevaJudha, ine zviyero zviviri kana zvitatu nerimwe.
2:7 Jesu akati kwavari, "Zadzai makate acho nemvura." Ivo vakaazadza kusvika chaizvo pamusoro.
2:8 Zvino Jesu akati kwavari, "Zvino kuzochera pauri, uye kutakura kumukuru womutambo. "Vakaita saizvozvo kwaari.
2:9 ndokubva, kana mukuru womutambo wakati aravira mvura ikava waini, sezvo akanga asingazivi kwarwakabva, nokuti varanda chete vakanga vachera mvura vaiziva, mukuru mutariri akadana chikomba,
2:10 uye akati kwaari: "Munhu wose anotanga kubudisa waini inonaka, ndokuzo, kana vava vakadhakwa, raanopa chii kwakaipa. Asi iwe wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. "
2:11 Izvi kwaiva kutanga kwezviratidzo kuti naJesu muKana yeGarirea, uye akaratidza kubwinya kwake, uye vadzidzi vake vakatenda kwaari.
2:12 shure kwaizvozvo, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 Zvino pasika yevaJudha yakange yaswedera, uye Jesu akakwira kuJerusarema.
2:14 Akawana, agere mutemberi, vanotengesa nzombe nemakwai nenjiva, uye evaitsinhanisa mari.
2:15 Zvino wakati aita chinhu chakafanana tyava kubva zvishoma tambo, akadzinga vose kubva panzvimbo yetemberi, kusanganisira makwai nemombe. Uye akadurura nendarira mari evaitsinhanisa mari, uye akapidigura tafura dzavo.
2:16 Uye kune vaya vakanga vachitengesa njiva, akati: "Bvisai zvinhu izvi muno, uye regai kuita imba yaBaba vangu imba yezvokutengeserana. "
2:17 uye zvechokwadi, Vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa kuchinzi: "Kushingairira imba yenyu kwakandipedza."
2:18 Ipapo vaJudha vakati kwaari, "Chii chiratidzo dzaungaratidza kwatiri, kuti unogona kuita zvinhu?"
2:19 Jesu akapindura akati kwavari, "Paradzai temberi iyi, uye mumazuva matatu ndichaimutsa ungaimutsa. "
2:20 Ipapo vaJudha vakati, "Temberi iyi yakavakwa makore makumi mana nematanhatu, uye iwe uchava ungaimutsa nemazuva matatu?"
2:21 Asi akanga achitaura pamusoro petemberi yomuviri wake.
2:22 saka, wakati amutswa kuvakafa, vadzidzi vake vakayeuchidzwa kuti wakange areva izvi, uye vakatenda Magwaro uye mushoko kuti Jesu akanga ataura.